उच्च रक्तचापले सताएको छ?, अपनाउनुस् यी सहज उपाय – Health Post Nepal
२०७८ पुष १५ गते ११:५२
काठमाडौं – उच्च रक्तचाप एक यस्तो स्वास्थ्य समस्या भएर आएको छ जसले मानिसहरूलाई पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा बढी सताएको छ। मुटुरोगजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा उच्च रक्तचापलाई कारक मानिने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। यही कारणले गर्दा डाक्टरहरूले पनि उच्च रक्तचापलाई ‘साइलेन्ट किलर डिजिज’ भनेर वर्गीकरण गरेका छन्।
अध्ययनले देखाएको छ कि, धेरै खराब जीवनशैलीका बानीहरू जस्तै आहारमा गडबड र शारीरिक निष्क्रियताले रक्तचापको समस्या बढाउँछ। मानिसहरूले यस बारे धेरै सावधान रहनु आवश्यक छ। स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन्, हामीमध्ये धेरैले उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि औषधिको प्रयोग गरिरहने गर्छौं, यद्यपि यी औषधिहरूको लामो समयसम्म प्रयोग हानिकारक हुन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा औषधिमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ। उच्च रक्तचापको समस्या कम गर्न अमेरिकी स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर माइकल ग्रेगरले केही उपायबारे बताएका छन्, जसको प्रयोग गरेर औषधिविना पनि रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
डा. माइकल ग्रेगर भन्छन्, ‘उच्च रक्तचाप कम गर्न औषधिभन्दा अन्य प्राकृतिक विधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि जीवनशैलीमा केही साधारण परिवर्तन गर्नु तपाईंका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ। यसका लागि उपवास पनि उत्तम विकल्प हुन सक्छ। लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूले पनि बोटबिरुवामा आधारित खानेकुराको सेवनबाट फाइदा लिन सक्छन्।
ब्लड प्रेशर कम गर्ने तरिका –
डाक्टर माइकलले आफ्नो भिडियोमा उच्च रक्तचाप कम गर्ने उपायबारे बताएका छन्। डा. ग्रेगर भन्छन्, ‘यी उपायहरू प्रयोग गरेर सजिलै रक्तचाप नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।’
-उच्च रक्तचापका बिरामीहरूले आहारमा धेरै बोटबिरुवामा आधारित चीजहरू (फलफूल र तरकारीहरू) समावेश गर्नुपर्छ, यसले रक्तचाप ७ अंकले घटाउँछ।
-बिरुवामा आधारित आहार बढाएर र मासुको सेवन घटाएर, रक्तचाप ११ अंकसम्म घटाउन सकिन्छ।
-रक्सी छोडेर उच्च रक्तचापमा थप ५ अंकले घटाउन सक्नुहुन्छ।
-यसबाहेक, अधिक तौल पनि रक्तचापको एक कारक मानिन्छ। करिब ५ किलो तौल घटाउँदा सिस्टोलिक बीपी ७ अंकले घटाउन सकिन्छ।
-कम्तिमा ३ महिनासम्मको नियमित एरोबिक व्यायामले रक्तचाप ९ अंकसम्म कम गर्न मद्दत गर्छ।
-उच्च रक्तचापबाट पीडित व्यक्तिहरूले सोडियमको सेवन कम गर्नुपर्छ, यसो गर्नाले तपाईले बीपीलाई १५ अंकले घटाउन सक्नुहुन्छ।
-सोडियमको मात्रा घटाएर विशुद्ध वनस्पतिमा आधारित आहारको सेवनले रक्तचाप १८ अंकसम्म कम गर्न मद्दत गर्छ।
-ब्लड प्रेसर उच्च रहने व्यक्तिका लागि पनि उपवास बस्नु फाइदाजनक हुन्छ। व्रत बस्दा पानी मात्र पिउनाले रक्तचाप ३७ अंकसम्म कम हुन्छ। ध्यान राख्नुहोस् कि डाक्टरको सल्लाह बिना एक दिन भन्दा बढी उपवास बस्नु हुँदैन।
-दिनको ३०० क्यालोरी प्रिस्क्राइब गर्नाले पनि रक्तचाप कम गर्न सफल हुन सक्छ। यसका लागि फलफूलको जुस, तरकारीको सूप आदि सेवन गर्नु लाभदायक मानिन्छ।